Maqaallada Jack Poyntz Martech Zone |
Maqaallada by Jack Poyntz
Jack Poyntz Studio waa shirkad naqshadeynta websaydhka ah oo shahaado khabiiro Shopify ah. Waxay diiradda saarayaan bixinta xalka websaydhka hal-abuurka ah si ay uga caawiyaan shirkadaha hamiga leh inay internetka ku koraan. Waxay la qabsadaan caqabado cusub iyagoo doonaya inay ka caawiyaan macaamiishooda inay gaaraan guul.
Jimce, Maarso 8, 2019 Arbacada, Oktoobar 14, 2020 Jack Poyntz
Ganacsiyadu waa inay hagaajiyaan xalalkooda shabakadda moobiilka si ay ciyaarta uga hor maraan. Waa kanaalka aasaasiga ah ee dadka badankood ay aadaan raadinta dukaanka ugu dhow ee kafee, qandaraaslaha saqafka ugu fiican, iyo wax kastoo Google gaari kara.